भारतीय सुरक्षा क्याम्प राख्न नेपाली भूमि अतिक्रमण – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
भारतीय सुरक्षा क्याम्प राख्न नेपाली भूमि अतिक्रमण
२०७१ जेष्ठ ५, सोमबार ०२:५२ गते
त्रिवेणीधाम । वाल्मीकि ऋषिको आश्रम रहेको विश्वास गरिने क्षेत्रमा समेत भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको स्थानीयहरुको भनाइ छ । स्थानीयहरुको गुनासो आएपछि चितवन जिल्ला प्रशासनले सिमाना बारे यथार्थ जानकारी पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयसँग विज्ञहरु पठाउन आग्रह गरेको छ ।
चितवन जिल्लाको क्षेत्र नं. ५ अन्तर्गत पर्ने माडी इलाकाको गर्दी गाविसको वडा नं. ९ अन्तर्गत रहेको सो ठाउँ भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको छ । भारत सरकारले सो क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) क्याम्प राख्दा नेपालको सिमाना मिचेर राखेको स्थानीयहरुले जानकारी दिए ।
वाल्मीकि आश्रमको पश्चिममा दुईवटा खोलाहरु रहेका छन् । आश्रमसँग जोडिएर तम्सा नदी बगेको छ । तम्सा नदीभन्दा लगभग पाँच सय मिटर पश्चिममा स्थानीयहरुले सोनाहा भन्ने स्वर्णभद्रा नदी बग्ने गर्छ । नेपालको सिमाना स्वर्णभद्रा नदी भएको स्थानीयहरुको दावी छ ।
एसएसबीले स्वर्णभद्रा नदी तरेर वाल्मीकि आश्रमसँगै जोडिएको तम्सा नदीको पारिपट्टि क्याम्प राखेको छ । एमाले चितवन क्षेत्र नं. ५ का संयोजक रामप्रसाद न्यौपाने एसएसबीका कारण तम्सा र स्वर्णभद्राबीचको आठ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण भएको बताउँछन् ।
सो ठाउँको जंगल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र पनि हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्व प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामप्रित यादव पनि आफू कार्यरत रहँदा निकुञ्जको सिमाना अहिले एसएसबी क्याम्प बसेकोभन्दा पाँच सय मिटर पश्चिमको स्वर्णभद्रा नदी नै रहेको बताउँछन् ।
चितवन निकुञ्जले आश्रम नजिकको फूलबारी भन्ने ठाउँमा नेपाली सेनाको पोष्ट नै राखेको
थियो । तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले सुरू गरेको सशस्त्र संघर्षका घटनाहरु बढ्दै जान थालेपछि विसं २०५६ सालमा सेनाको सो पोष्ट त्यहाँबाट हटाउनु परेको थियो ।
फूलबारी भन्ने ठाउँबाट नेपाली सेनाको पोष्ट हटेको एक वर्षपछि विसं २०५७ सालमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको क्याम्प स्थापना भएको हो । भारतीय सीमा सुरक्षा बल आएर बसेपछि नेपाली सिमाना मिचियो भनेर बारम्बार कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयको आरोप छ ।
चितवनमा पर्ने वाल्मीकि आश्रम पुग्न सजिलो भने छैन । नवलपरासीको गैंडाकोट, बर्दघाट हुँदै त्रिवेणी पुगेपछि आश्रम जान सात किलोमिटर भारतीय जंगल पार गर्नुपर्ने हुन्छ । चितवन प्रशासनको नजरभन्दा धेरै पर रहेकाले पनि यहाँको विषय उजागार हुन सकेको थिएन ।
‘स्थानीयका गुनासाहरु सुनेपछि हामी पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जुटेका छौं’ चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले भने । गृह मन्त्रालयले नापी विभागसँग समन्वय गरेर सीमा यकिन गर्न टोली खटाउन थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिए ।
सोही क्षेत्रमा वैशाख २६ गते पुगेका सहरी विकास मन्त्री नारायण खड्काले पनि भारतीय दूताबासमा यो कुरा पु¥याउने र सीमाका सम्बन्धमा कुटनीतिक तबरले समाधान निकाल्ने वचन दिएका थिए । सीमाविद्बाटै दिगो समाधान जुटाउने पक्षमा आपूm रहेको मन्त्री खड्काले बताए ।
साथै चितवन प्रशासनले वाल्मीकि आश्रममका सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकी पनि स्थापना गरेको छ । बैशाख २१ गतेदेखि सशस्त्र प्रहरीको २२ जनाको टोली सो क्षेत्रमा खटेको छ । आश्रम क्षेत्रमा मगर समुदायका १५ घर पनि रहेका छन् ।